दर्ता दन्त सहायक कसरी - हुन शरणार्थीका लागि राम्रो ज्याला संग जब & प्रवासिहरु | USAHello | USAHello
दर्ता दन्त सहायक कसरी - हुन शरणार्थीका लागि राम्रो ज्याला संग जब & प्रवासिहरु
दन्त सहायक तिनीहरूले धेरै चाहन्थे इनाम दन्त तलब दर्ता
दन्त चिकित्सक सहायक धेरै कारण एक प्रसिद्ध क्यारियर पथ छ. काम सुरक्षा प्रदान गर्न, र यो कर्मचारीहरु प्रवेश गर्न सजिलो छ. दन्त सहायक मानिसहरू दाँत राम्रो हेरचाह गर्न मद्दत गर्न. यस्तो निर्धारण भेटघाट रूपमा जिम्मेवारी प्रदर्शन, प्रक्रियाहरु संग एक्स-रेज वा मद्दत दन्त चिकित्सक लिएर. दन्त सहायक धेरै कौशल र विवरण ध्यान. यस लेखमा काम र तलब लागि सामान्य आशा मा सूचित गर्नेछौं. साथै, तपाईं पनि आवश्यक चरणहरू दर्ता दन्त सहायक पेसा सफल व्यापार गर्न सिक्नेछौं.
यो पेशामा बारेमा
तिनीहरूले दन्त चिकित्सक र कार्यालय कर्मचारी समर्थन. दन्त चिकित्सक सहायक विरामीहरु तालिका लागि भेटघाट निर्धारण र रोगी रेकर्ड राख्छ. दन्त चिकित्सक मदत उसले रोगी व्यवहार गर्दा. तिनीहरूले उपकरण एक्स-रे तस्बिरहरू रोगी प्रगति र लिन,। तिनीहरूले त्यो ढुक्कको निश्चित.
दन्त सहायक के बारेमा थप जान्नका लागि यो भिडियो हेर्नुहोस्
सबैभन्दा दन्त सहायक धेरै दन्त चिकित्सक वा एउटा मात्र कार्यालय हुन सक्छ जो एक दन्त चिकित्सक काम. जहाँ दन्त चिकित्सक ठूलो स्वास्थ्य हेरविचार टोली भाग चिकित्सा केन्द्र, अन्य दन्त काम गर्न दन्त सहायक.
बन्न सक्छ दर्ता दन्त चिकित्सक सहायक लाभप्रद काम गर्न सक्छन्. तपाईं मान्छे आफ्नो दाँत को हेरविचार मदत र राम्रो आय प्राप्त गर्न सक्छन्. श्रम सांख्यिकी ब्यूरो अनुसार मई 2014 को रूप मा, को औसत वार्षिक तलब दन्त सहायक प्रदान 39090 $.
संयुक्त राज्य अमेरिका मा दन्त चिकित्सक र तेज-बढ्दै जब एक मदत. माग बढ्न जारी हुनेछ, र यी भूमिकाहरू भर्न मानिसहरूलाई दन्त चिकित्सक आवश्यक हुनेछ.
दन्त सहायक लागि शीर्ष पाँच अवस्थामा लाभ
नयाँ हैम्पशायर, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को उत्तरी राज्य
मैसाचुसेट्स, राज्य अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका को पूर्व तट मा स्थित छ
उत्तर डेकोटा अमेरिकी राज्य
आवश्यक गरिने कौशल
कठिन कौशल: चिकित्सा इतिहास, एक्स-रेज, र दन्त सामाग्री प्रयोग रेकर्ड व्यवस्थापन कौशल,.
नरम सीप: दन्त सहायक दन्त चिकित्सक र प्रशासकहरूले छेउमा पक्ष काम गर्न राम्रो संचार कौशल छ हुनुपर्छ. तिनीहरूले विरामीहरु संग पेशेवर र बिस्तारै कुराकानी गर्नुपर्छ. यो तथाकथित छ “बाटो कुर्सी” राम्रो.
भाषा कौशल यसलाई कुनै पनि काम मा ठूलो रकम छ! सीमित अंग्रेजी संग विरामीहरु धेरै देख्न भनेर दन्त कार्यालय. आफ्नो भाषा कौशल विरामीहरु कुराकानी गर्न मदत र सहज महसुस हुन सक्छ.
जबकि केही भन्छ एक औपचारिक लाइसेन्स आवश्यक छैन, तर ती सबै भन्दा यसलाई आवश्यक छैन. यसलाई दन्त सहायता कार्यक्रमबाट लाग्न सक्छ9आधारमा पूरा गर्न दुई वर्ष महिना प्रमाणपत्र वा उपाधि वा प्रमाणपत्र कार्यक्रम कि.
सामान्यतया विद्यार्थीहरूले वा समुदाय प्राविधिक कलेज सहायक स्कूल कार्यक्रममा त दर्ता दन्त चिकित्सक पूरा. कक्षाकोठामा शिक्षण गर्न साथै, कार्यक्रम को सबै भन्दा एक चिकित्सीय वातावरणमा व्यावहारिक शिक्षाका लागि अवसर प्रदान. सामान्यतया यो पाठ्यक्रम समावेश:
दन्त कार्यालय व्यवस्थापन
दन्त विज्ञान लागूपदार्थ
CPR र पहिलो सहायता
प्रमाणीकरण र लाइसेन्स आवश्यकताहरु राज्य बाट भिन्न. जहाँ आवश्यक प्रमाणीकरण, सामान्यतया विद्यार्थीहरूले दन्त सहायक प्रमाणीकरण परीक्षा पास देशहरूमा (CDA). यो परीक्षण केन्द्र मा आयोजित छ जो परीक्षा मा 320-मुद्दा, “पिअर्सन Vue” यसलाई निम्न तत्त्वहरू समावेश:
एक कुर्सी को व्यवहार
विकिरण स्वास्थ्य र सुरक्षा
10 – स्वच्छता र रोग रोकथाम को अनुगमन
पहिलो, राज्य उपकरण र जाने सक्छ विद्यालयमा आवश्यकताहरु पत्ता लगाउन अनुसन्धान सञ्चालन. तपाईं के तपाईं लागि सही निर्णय गर्न सक्छन्, एक पटक पर्याप्त जानकारी सङ्कलन गर्न सक्छन्. तपाईं कलेज गर्न लागू सहायताको आवश्यक छ भने, थप जान्नका लागि यो लेख पढ्न. म कलेज लागि कसरी लागू हुन्छन्?
आफ्नो शिक्षा कसरी वित्त
यसलाई भविष्यको लागि योजना महत्त्वपूर्ण छ त दन्त शिक्षा, महंगा हुन सक्छ. दाँत मदत गर्न औसत लागत को राशि देखि लिएर, राज्य बाट अवस्थामा भिन्न हुन सक्छन् 850 गर्न 7560 डलर. यसलाई केही प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि यस्तो परीक्षा र अतिरिक्त प्रयोगशाला शुल्क र आपूर्ति को दर्ता रूपमा थप शुल्क, हो हुन सक्छ.
प्रमाणपत्र मद्दत दन्त परीक्षा
पुस्तक र आपूर्ति
जसमा अनुसन्धान उपस्थित स्कूल आफ्नो डोमेनमा भर्ना र शिक्षण शुल्क लागत सिक्न. दन्त चिकित्सा सहायता को कलेज महंगा हुन सक्छ, तर छैन भनेर आफ्नो सपना प्राप्त तपाईंले रोक्न गरौं. तपाईं आफ्नो शिक्षा वित्त तरिकाहरू छन्:
तपाईं यसलाई सुरु गर्न सक्नुहुन्छ कि पहिलो चरण को एक आफ्नो बचत छ. तपाईं हाल काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले स्कूल लागि पैसा बचत सुरु गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं पनि विद्यार्थीहरूको लागि संघीय सहायता लागि निःशुल्क अनुप्रयोगको लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ (FAFSA)तपाईं मदत सरकार आर्थिक सहायताको लागि योग्य.
छात्रवृत्ति पनि आफ्नो शिक्षा वित्त उत्कृष्ट तरिका हो. तपाईं पनि हाम्रो सूची जाँच गर्न सक्नुहुन्छ शरणार्थी र आप्रवासियों लागि छात्रवृत्ति साइट RCO मा. तपाईं सिक्न मदत गर्न सक्छ कि यो लेख पढ्न सक्नुहुन्छ कसरी एकेडेमी वा आप्रवासी शरणार्थी सफल गर्न.
स्वास्थ्य हेरविचार कार्यहरु बारेमा थप जान्न
तपाईं छात्रवृत्ति लागि देख रहे हो? सिक्न शरणार्थी र आप्रवासियों लागि छात्रवृत्ति
हामी सुरु गर्न एक उच्च विद्यालय उपाधि चाहिन्छ? خذ GED على الإنترنت مجاناً® دورة
एक दन्त सहायक रूपमा प्रमाणित रही बारेमा जान्न (लागि कनेक्टर https://www.danb.org/Become-Certified/Exams-and-Certifications/CDA.aspx)
तपाईंको शहर वा राज्य मा तलब र अन्य तथ्याङ्कले दन्त सहायक (https लिङ्क://www.bls.gov/oes/current/oes319091.htm